IHHOVISI loMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eGreytown licela ukufuniswa laba abalandelayo:
>Ubaba kaNokwazi Amahle Mkhize ozalwa nguThishiwe Mkhize owashona ngo-2006 ngo Januwari 12, waseShane. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-P.N. Khoza kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaSabelo Ntanzi owazalwa ngo-2002-08-25 ozalwa uNelisiwe Ntanzi osewadlula emhlabeni owayehlala eMatimatolo, eMagubuludwini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-N.A. Ndlazi kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaNothando Princess Khumalo owazalwa ngo-2005-03-18 ezalwa nguNomthandazo Khumalo owashona zingu-16-08-2015, waseNhlalakahle. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-H.P.N. Brown kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaClaude Baxter owazalwa ngo-31-03-2003 ezalwa nguPinky Silindile Baxter owashona ngezi-2008-06-26, waseNhlalakahle. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-H.P.N. Brown kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaAndiswa Amahle Duma owazalwa ngo-21-03-2005 ezalwa nguNombuso Hycintha Duma owashona ngo-17-09-201. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-H.P.N. Brown kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba ka-Amanda Mchunu owazalwa ngo-20-12-2008 noSnakhokonke Anelisa Mchunu owazalwa ngo-05-12-2017 abazalwa nguSybile Londiwe Samkelisiwe Dladla owashona ngo-27-05-2015. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-H.P.N. Brown kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaSamukelisiwe Khumalo owazalwa ngo-2003-05-02 noMalandwe owazalwa ngo-2009-01-09 abazalwa nguNomcebo Lindies Khumalo waseNtembisweni, KwaNtuthu odlule emhlabeni ngo-2017. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-N.Z. Mzila kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaSphesihle Khumalo owazalwa ngo-2003-06-23 ozalwa nguGugu Khumalo waseNtembisweni, eNgqayizivele. Ubaba kuthiwa wayengowakwaMchunu eMakhabeleni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-N.Z. Mzila kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaLuyanda Ngobese owamzala kuMinenhle Ngobese owayehlala eMuden. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.B. Nyawo kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaGeorge Mzolo ozalwa nguDladla Buhle osewadlula emhlabeni ngo-2009-07-30 wayehlala eMuden eNkanini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-X.M. Mthembu kule nombolo 033 417 1527.
>Umama kaBayanda Mchunu owazalwa ngo-23-01-2004, ubaba wengane uDavid Sikhumbuzo Mchunu. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>Umama ka-Aphelele Lebone owazalwa ngo-2009/10, ubaba wakhe nguMzokhona Wiseman Mdlalose wase Matimatolo. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>UNtombifikile Magubane ongumama kaMzwandile Dladla, ubaba wakhe uMthobisi Justice Dladla waseMuden eNkanini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>Abazali bakaLondiwe Princess Shange waseMatimatolo owazalwa ngo-2010-03-04, umama wakhe uNothile Zulu. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba kaSthabiso Ngubane waseMnambithi, ingane yazalwa ngo-2005-07-23 umama wakhe ongasekho emhlabeni uThembile Precious Ngubane. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>Ubaba ka-Ayo Mzila waseMatimatolo owazalwa ngo 2005-05-10, umama wakhe uNonhlanhla Mzila ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kule nombolo 033 417 1527.
>Umama kaSimphiwe Junior Jostry owazalwa ngo-2009-03-20, ubaba wakhe ongasekho emhlabeni u-Elvis Jostry. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T.R. Xhakaza kwethi 033 417 1527.
>Ubaba kaLulama Goge owazalwa ngo-2007-12-18, umama wakhe ongasekho emhlabeni uBongisile Ximba. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-N.A. Mpanza kule nombolo 033 417 1527.